Ressipraossiteh : comments » What if ...
Monday, September 28, 2020 | Add a comment
Mpifanolobodirindrina ry Rampanarivo, eo ambony avaratra sy Ikotomarefo eo ambany atsimo. Tsy mifankahazo be nefa tsy mpiady lava fa samy miezaka miaina ny fiainany. Fa indray andro, tsy naharitra ihany Ikotomarefo, fa mba nangataka fifampiresahana tamin-dRampanarivo.
* Tena tsy lasa ilay rano avy ao aminareo mianjera mankaty aminay, hoy Ikotomarefo fa itadiavo làlana. Aiza ve ka ny rano malotonareo no mameno ny fantsona aty aminay, sasatra mihitsy izahay manalalaka ny fantsona. Aleo mba mifanaja isika, aza alefa aty amin’ny fantsona aty aminay intsony ny rano malotonareo fa manelingelina ny hafa.
Rampanarivo moa tsy dia tia miady aman’olona, ary vao mainka tsy nampazoto azy ny hifanandrina amin’Ikotomarefo noho ny faripiainana tsy mitovy, ndrao lazain’ny fiarahamonina fa mpanenjika ny majinika izy. Tsy misy vahaolana tsotra anefa hitany azo ampiharina satria tsy mifanolotra amin’ny arabe ny taniny ary tsy misy lakan-drano maloto hafa azony andefasana ny rano avy ao aminy. Hany heriny aloha, nangonina ny rano maloto, ary nariany tamin’ny fiarakodia tsindraindray. Nisy fotoana sendra nisy rano nandeha ihany nivoaka tany amin’Ikotomarefo fa avy hatrany dia nanofan’Ikotomarefo paompy mandeha solika ary dia nandefasany rano maloto avy tany aminy niverina ilay fantson-dRampanarivo. Niverina hatrany an-dakozia sy basà an-dRampanarivo tokoa ny rano maloto. “Mahalala ny anarako tsara izay ny vaventy”, hoy Ikotomarefo nihôgahôga tao an-tanànany tao.
Fa fomban’Ikotomarefo ny mandoro fako in-droa isan-kerinandro, sy ny manao kifetifety manasa namana isaky ny zoma hariva sy alahady antoandro. Mba tsy tantin-dRampanarivo ihany koa ireo zavatra roa ireo.
Rehefa lasa ny iray volana taorian’ny fifampiresahana niantsoan’Ikotomarefo azy iny, dia mba nampiantso an’Ikotomarefo indray izy.
* Tena tsy lasa ilay setroka fako doranao io Andriamatoa, hoy izy, ary ilay tabatabanareo isaky ny zoma alina sy alahady antoandro ihany koa tsy afaka tohizana intsony. Miangavy anao aho mba hatsahatrao manomboka izao ihany koa ireo fombanao ireo fa manelingelina ny hafa.
Saika hanohy resaka Ikotomarefo fa toa tsy dia nazoto hiresaka maharitra Rampanarivo, rehefa heno izay tiany hampitaina dia nofaranany ny tafa.
Zoma maraina ary, nandoro fako toy ny mahazatra Ikotomarefo ary niakatra ny setroka. Nitsirika teny am-baravarankely Rampanarivo :
* Ity ilay efa nanafarako anao ramose an, hoy izy, fa manelingelina anay ô!
- Aty an-tanànako aho no mandoro ny fakoko e, hoy Ikotomarefo, somary an’avona, fa ny setroka tsy maintsy miakatra e.
Nagorodan-dRampanarivo niaraka tamin’izay ny rano maloto voaangona nandritra ny herinandro.
* Valy fingika fingàka ve? hoy Ikotomarefo, nanomboka nila ady.
- Aty an-tanànako aho no manary rano maloto e, hoy Rampanarivo, fa ny rano tsy maintsy midina ô!
Nalain’Ikotomarefo indray ilay paompy mandeha solika ary dia nikasa ny hamerina ilay rano maloto any amin-dRampanarivo izy, noho ny hasosorany. Vao nalefa ilay paompy dia nifantsitsitra be teo an-tokontaniny. Hay efa tsinjon-dRampanarivo izay fihetsika izay ka efa nasiany “vanne d’arret” ny fivoahan-drano avy tao aminy. Rehefa avy nanatosaka ilay rano maloto izy dia nohidiany io, hany ka tsy nisy nahafahan’ilay rano maloton’Ikotomarefo niditra tany an-tanànany intsony fa dia niverina niparitaka nandena an’Ikotomarefo mianakavy.
Ny hariva indray, tonga ireto namana mpiara-manao zoma manifika hirevy eo an-tokontanin’Ikotomarefo. Rampanarivo namelona fiara handao vetivety ny tanàna misy tabataba. Fa manampahaizana momba ny simia moa rangahy io, mialoha ny nandehanany dia nisy kasinga roa izay nafangarony teo an-tsisin-tambohony. Solifara ny iray dia tsy haiko ilay iray hafa fa izy ihany no mahalala azy. Vao nifangaro ireo dia namoaka fofona mantsina toy ireny lavapiringa loarana ireny, tena tsy mba azo niainana. Tsy nisy revy afaka natao tao amin-dry Ikotomarefo fa mila hahatorana ny fofona.
Hany heriny dia nitaraina tamin’ireo namany : izao lesy no hasomparan’ny mpanam-bola an. Ananany ny vola dia ny fiainan’ialahy no korontaniny.
Angano angano, arira arira, Je suis Air France.
« Ressipraossiteh (2)